प्रचण्ड–माधवलाई प्रधानमन्त्रीको ‘अफर’ प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि ‘बार्गेनिङ’ ? « pennepal.com
प्रचण्ड–माधवलाई प्रधानमन्त्रीको ‘अफर’ प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि ‘बार्गेनिङ’ ?
Published On :2June, 2022 8:08 pm By :
काठमाडौं । बिहीबार दिनभर जसो राजनीतिक वृत्त नेकपा मा‌ओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको ‘अफर को चर्चाले तरंगित बन्यो ।
प्रचण्डजीले एउटा कार्यक्रममा भन्नुभयो, मलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आयो। त्यसपछि मैले जवाफ दिदैँ भनेको थिएँ, प्रचण्ड कमरेड, तपाईंलाई मात्र होइन, अन्त पनि आएको होला हैु अध्यक्ष नेपालले भने ।
प्रधानमन्त्रीको कार्ड फालेर भूलभूलैयामा पार्न र मुर्ख बनाउन खोजेको अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ ।
ुयो कार्ड प्रयोग गर्ने तरिका, मान्छेलाई मूर्ख बनाउन सकिन्छ भन्ने ठूलो भ्रम हो । यस्तो चालबाजीको तरिकाले विगतमा पनि नोक्सान मात्र गर्‍योु, अध्यक्ष नेपालले भने, ुअब पनि चालबाजीको सहारा लिने रु मान्छेलाई लोभ देखाउन सकिन्छ कि, लालच देखाएर सकिन्छ कि, यो तरिका नगरौं । उनले यस्ता लोभलालचा भुलभुलैयामा पर्ने मान्छे आफू नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा नलोभिने दाबी गरे ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा स्वयंले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका बेला कांग्रेसबाटै त्यस्तो प्रस्ताव जाने सम्भावना न्यून छ । पार्टीमा देउवा बलियो अवस्थामा छन् । केन्द्रीय समितिमा बिरोध हुँदा हुँदै त उनले स्थानीय तह निर्वाचनमा सबैलाई ुलतारेरु गठबन्धनको पक्षमा लान सकेका थिए भने उनको विकल्पमा कांग्रेसका कुनै पनि नेताले प्रचण्ड र माधवलाई सत्ताको साँचो बुझाउ नसक्ने कांग्रेसका एक नेताले बताए ।
त्यसो भए प्रधानमन्त्रीको अफर आएको विषय के हो त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, स्थानीय तहको चुनावबाट कांग्रेसको आडमा चुनाव जित्न सकिने रहेछ भन्ने उहाँहरुले थाहा पाउनु भयो । अब प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्ने विषयमा छलफल सुरु भएपछि बढी सीट पाउनका लागि गरिएको बार्गेनिङ हो ।
त्यसो त एमाले नेताहरुले पनि प्रचण्ड र माधवले आफूहरुलाई देखाएर कांग्रेससँग बार्गेनिङ थालेको बताउँछन् । नेकपा एमालेका एक नेताले भने, स्थानीय तहको चुनावको समीक्षा भइरहेको छ । जित हारका विवेचना भइरहेका छन् । चुनावको समय आएको छैन र देउवाको सट्टा अरु कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने हतारो एमालेलाई छैन । यस्तो समयमा दुवै जनाले एउटै बोली बोल्नुमा कांग्रेसलाई थर्काएर राख्ने रणनीति देखिन्छ ।